ကိုလိုနီခေတ် Research Materials
This page containsalist of user images about ကိုလိုနီခေတ် which are relevant to the point and besides images, you can also use the tabs in the bottom to browse ကိုလိုနီခေတ် news, videos, wiki information, tweets, documents and weblinks.
P!nk - Just Give Me A Reason ft. Nate Ruess MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ (OFFICIAL VIDEO) Rihanna - Rehab ft. Justin TimberlakeMusic video by Rihanna performing Rehab. YouTube view counts pre-VEVO: 19591123. (C) 2007 The Island Def Jam Music Group. David Guetta - Titanium ft. Sia Red vs. Blue S8 Tex fights Reds and Blues in awesome action sequenceGo to RoosterTeeth.com for all of season 8 of RvB! David Guetta - She Wolf (Falling To Pieces) ft. Sia Rihanna - Russian Roulette Einstein vs Stephen Hawking -Epic Rap Battles of History #7Download this song: http://bit.ly/EpicRap7 New ERB merch: http://bit.ly/MNwYxq Tweet this Vid-ee-oh: http://clicktotweet.com/TpUg9 Hi. My name is Nice Peter,... Rihanna - Stay ft. Mikky Ekko Rihanna - We RideMusic video by Rihanna performing We Ride. (C) 2006 The Island Def Jam Music Group. One Direction - One Way Or Another (Teenage Kicks)As well as releasing the Red Nose Day single, One Direction are fundraising by doing something funny for money...and they want you to join them! Get involved... One Direction - Little Things MACKLEMORE & RYAN LEWIS - CAN'T HOLD US FEAT. RAY DALTON (OFFICIAL MUSIC VIDEO)Macklemore & Ryan Lewis present the official music video for Can't Hold Us feat. Ray Dalton. Can't Hold Us on iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/cant-... Draw My Life- Jenna MarblesThis video accidentally turned out kind of sad, ME SO SOWWY IT NOT POSED TO BE SAD WHO WANTS HUGS AND COOKIES? Also, FYI for anyone attempting this, it takes... Rihanna - Diamonds Rihanna - Pon de Replay (Internet Version)Music video by Rihanna performing Pon de Replay. YouTube view counts pre-VEVO: 4166822. (C) 2005 The Island Def Jam Music Group. Key & Peele: Substitute TeacherA substitute teacher from the inner city refuses to be messed with while taking attendance. David Guetta - Just One Last Time ft. Taped Rai"Just One Last Time" feat. Taped Rai. Available to download on iTunes including remixes of : Tiësto, HARD ROCK SOFA & Deniz Koyu http://smarturl.it/DGJustOne... Draw My Life - Ryan HigaSo i was pretty hesitant to make this video... but after all of your request, here is my Draw My Life video! Check out my 2nd Channel for more vlogs: http://... Harrison Ford Won't Answer Star Wars QuestionsSee Harrison Ford in 42! Go to http://42movie.warnerbros.com/ Jimmy Kimmel Live - Harrison Ford Won't Answer Star Wars Questions Jimmy Kimmel Live's YouTube ... ဘရာဇီး ဖက်ဒရယ် သမ္မတနိုင်ငံ
နိုင်ငံတော်ဆောင်ပုဒ် - "OrdemeProgresso"
နိုင်ငံတော်သီချင်း - Hino Nacional Brasileiro
ဧရိယာ - 8514877 km2 (3287597 sq mi) (အဆင့်: 5th)
ရေဖုံးလွှမ်းမှု - 0.65%
လူဦးရေ - 192,272,890 (အဆင့် - 5th)
လူဦးရေသိပ်သည်းမှု - 22 /km² (57/sq mi) (အဆင့် - )
သမ္မတ - Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
ဒုသမ္မတ - José Alencar (PRB)
Declared -7September 1822
Recognized - 29 August 1825
Republic - 15 November 1889
Current constitution -5October 1988
$2.013 trillion (အဆင့် - )
$10,513 (အဆင့် - )
0.813 (အဆင့် - 75th)
ဘရာဇီးနိုင်ငံသည် တောင်အမေရိကတိုက်တွင် အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး လူဦးရေအရရော နယ်မြေ အကျယ်အဝန်းအရပါ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပဉ္စမအကြီးဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ စပိန်ဘာသာသုံးသည့် အမေရိကနိုင်ငံများအကြား ဘရာဇီးသာလျှင် ပေါ်တူဂီ ဘာသာကို ရုံးသုံးဘာသာအဖြစ် အသုံးပြုသည်။  
ပေါ်တူဂီ ကိုလိုနီခေတ် [ပြင်​ဆင်​ရန်​]
ပထမဆုံး စတင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်မှာ ၁၅၃၂ ခုနှစ် ဖြစ်သော်လည်း ကိုလိုနီ နယ်မြေ အဖြစ် သိမ်းပိုက်ခြင်းမှာ ၁၅၃၄ တွင်မှ စတင်ခဲ့သည်။ ဒွန် ဂျို ၃ မှ နယ်မြေ ၁၂ ခု အဖြစ် ခွဲခြား သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ထို အစီအစဉ်မှာ ပြဿနာ များစွာ ရှိသဖြင့် ၁၅၄၉ ခုနှစ်တွင် ဘုရင်မှ ကိုလိုနီနယ်မြေ တစ်ခုလုံးကို အုပ်ချုပ်ရန် ဘုရင်ခံချုပ် တစ်ယောက်ကို ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ပေါ်တူဂီတို့သည် အချို့မျိုးနွယ်စုတို့ကို သိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ကြပြီး ကျန်လူမျိုးစုများမှာ ကျွန်ပြုခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ အချို့သော လူမျိုးစုများမှာ ကာလရှည် စစ်ပွဲများနှင့် သူတို့ထံတွင် ကုသရန် ဆေးမရှိသော ဥရောပမှ သယ်ဆောင်လာသည့် ရောဂါများကြောင့် မျိုးပြုတ် သွားခဲ့ရသည်။ ၁၆ ရာစု အလယ်ပိုင်းသို့ ရောက်သောအခါတွင် သကြားသည် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ အဓိက တင်ပို့ကုန် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ပေါ်တူဂီတို့ အနေနှင့် တိုးမြင့်လာသော နိုင်ငံတကာမှ ဝယ်လိုအားကို အမှီလိုက်နိုင်ရန် အာဖရိကမှ ကျွန်များကို တင်သွင်းလာခဲ့ကြသည်။
ပြင်သစ်တို့ကို တိုက်ခိုက်သော စစ်ပွဲများမှ တဆင့် ပေါ်တူဂီတို့သည် ၎င်းတို့၏ နယ်ပယ်ကို တဖြည်းဖြည်း ချဲ့ထွင်လာခဲ့ပြီး အရှေ့တောင်ဘက်ရှိ ရီယို ဒီ ဂျီးနေးရိုးမြို့ကို ၁၅၆၇ ခုနှစ်တွင် သိမ်းပိုက်ကာ အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ ဆောလူးဝစ်မြို့ကို ၁၆၁၅ တွင် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ အမေဇုံ မိုးသစ်တော များအတွင်းသို့ စစ်တပ်များ စေလွှတ်၍ ဗြိတိသျှနှင့် ဒတ်ချ်တို့ အခိုင်အမာ တပ်စွဲထားသော နေရာများကို အောင်မြင် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး ၁၆၆၉ ခုနှစ်မှစ၍ ကျေးရွာများနှင့် ခံတပ်များ စတင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၆၈၀ တွင် တောင်ဘက်အစွန်ဆုံး အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ရိုင်ယိုဒီလာ ပလာတာ မြစ်ကမ်းတွင် ဆာခရာမင်တိုမြို့ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ (ယနေ့ခေတ် ဥရုဂွေးနိုင်ငံ နေရာဖြစ်သည်။)
လွတ်လပ်ပြီးခေတ်နှင့် ဘရာဇီးအင်ပိုင်ယာ [ပြင်​ဆင်​ရန်​]
အစောပိုင်း သမ္မတနိုင်ငံ [ပြင်​ဆင်​ရန်​]
ယနေ့ခေတ် ဘရာဇီး [ပြင်​ဆင်​ရန်​]
ဗားဂပ်စ် မိမိဘာသာ အဆုံးစီရင်ပြီးသည့် နောက်တွင် ခေတ္တခဏမျှ အုပ်ချုပ်သည့် အစိုးရများစွာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။  ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် ဂျူဆယ်လီနို ကုဗစ်ရှက် သမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံ အင်အားစုများနှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သဖြင့် သူ၏ လက်ထက်တွင် ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမား မပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေ။  စီးပွားရေး နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ သိသာစွာ တိုးတက်လာခဲ့သည်။  သူ၏ အကြီးမားဆုံးသော အောင်မြင်မှု တစ်ရပ်မှာ မြို့တော်သစ် ဘရာဆေးလေးယားကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် မြို့တော်သစ်ကို တရားဝင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။  သူ၏ နေရာကို ဆက်ခံသူမှာ ဂျာနီယို ကွာဒရို ဖြစ်ပြီး ရာထူးဆက်ခံပြီး တစ်နှစ်မျှ မပြည့်သေးသည့် အချိန် ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင်ပင် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သွားခဲ့သည်။  ထိုအချိန်က ဒုတိယသမ္မတ ဖြစ်သူ ရှဝေါင် ဂေါင်လတ်က သမ္မတ ရာထူးကို လွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်မှုများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ၁၉၆၄ တွင် စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြင့် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခြင်း ခံခဲ့ရပြီး စစ်အစိုးရ တက်လာခဲ့သည်။
↑ Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de GeografiaeEstatística. Retrieved2January 2010.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Brazil. International Monetary Fund. Retrieved on 2010-04-21။
↑ UNDP Human Development Report 2009. Table H: Human development index 2007 and its components (PDF). UNDP. Retrieved on 2009-10-05။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ ၄.၄ ၄.၅ ၄.၆ Geography of Brazil. Central Intelligence Agency (2008). Retrieved on 2008-06-03။
↑ People of Brazil. Central Intelligence Agency (2008). Retrieved on 2008-06-03။
↑ Introduction of Brazil. Central Intelligence Agency (2008). Retrieved on 2008-06-03။
↑ CIA – The World Factbook – Country Comparisons – GDP (purchasing power parity). Cia.gov. Retrieved on 25 January 2011။
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ Skidmore, p. 27.
↑ Brazil elects Dilma Rousseff, nation's first woman president. CNN (2010-10-31). Retrieved on 2011-08-08။
↑ ၄၅.၀ ၄၅.၁ Template:Cite encyclopedia[dubious – discuss]
↑ Hora Legal Brasileira. Observatório Nacional. Archived from the original on 2011-07-22။ Retrieved on 2009-02-21။
↑ ၄၈.၀ ၄၈.၁ ၄၈.၂ ၄၈.၃ Template:Cite encyclopedia[dubious – discuss]
↑ ၄၉.၀ ၄၉.၁ Template:Cite encyclopedia[dubious – discuss]